SERASERA, TENY MALAGASY : MAMAKY ADY ! (15/06/11) - rov@higa
SERASERA, TENY MALAGASY : MAMAKY ADY ! (15/06/11)
15 Juin 2011, 21:55pm
Sambory I TGV … (+vidéos)
Tofoka tanteraka amin’ny lainga vary raraka ataon’ny FATE ny vahoaka. Hatrany ivelany ka hatreto an-tanindrazana dia tsy mahamenatra ny mpanongam-panjakana ny mivadibadika amin’ny teniny. Teo am-piandrasana ny tany Gaborone ny tenany dia nilaza fa “tsy ho any raha tsy mahazo fanasana amin’ny maha-filohan’ny tetezamita” azy. Avy eo nivadika hoe “hody raha vao tsy sonia no atao any”.
Noho ny tonga avy any Botswana kosa dia nanambara fa “miandry am-pitoniana ny fanapahan-kevitry ny SADC ary vonona ny hampihantra an’izany”. Izao indray dia hoe “mitsipaka ny fanambarana tany Sandton ary hampihantra tsy misy fepetra ny sori-dalana” teny Ivato.
Ny famitaham-bahoaka ho an’ny olona eo amin’ny fitondrana dia midika ho fiheverana ny tompony ho dondrona noho ny mpindrana. Raha tsy andraisana fepetra lehibe ireto fanetriben’ny Firenena ireto dia ny vahoaka Malagasy mihitsy no hiharan’ny hadalany. Ary efa manomboka izany amin’izao fotoana izao.
Tsy itoeran’ny fahendrena ny FATE (+vidéo)
Komandy miaramila Niala saron-tava
Niseho masoandro ary dia miharihary toy ny vay an-kandrina ankehitriny fa manao politika ny komandy eo anivon’ny foloalindahy malagasy ahitana ny tafika, zandary ary polisy.
Niala saron-tava izy ireo omaly, ka nanao fanambarana politika ho setrin’ny fanapahan-kevitra noraisin’ny SADC nivory tatsy Sandton Afrika Atsimo ny 12 jona teo. Vahaolana politika no naroson’ny SADC taorian’ny ny fandravonana ny soso-kevitr’ireo vondrona politika miisa 11 nasain’izy ireo hakan-kevitra tany Gaborone ny 06 sy 07 jona teo, mba handaminana ny krizy mitarazoka eto Madagasikara nefa dia ireto komandy ireto indray ankehitriny no mijoro ho sakana amin’ny fanatanterahana izany. Nirahina hanao fanambarana tao amin’ny Toby Ratsimandrava izy ireo omaly, rehefa avy navorin’i Andry Rajoelina tao Ambohitsorohitra ny maraina. Mazava loatra fa hary fitaovana ny olona alefa hamita iraka.
Mikaikaika anefa ny vahoaka amin’ny asan-jiolahy, mitombo isa ny very asa, manjaka ny kolikoly sy fanaparam-pahefana, mihalalina ny fahasahiranana ary porofo hita maso ny zava-nitranga teto an-drenivohitra sy ny manodidina omaly nisiana filaharambe teny amin’ireo toby mpaninjara solika, nefa dia sahy milaza ireo komandy miaramila fa miverina amin’ny laoniny ny fiainam-bahoaka. Mitsabaka amin’ny raharahan’ny mpanao politika ireto komandy ireto, ary toa miala ny andraikitra manandrify azy, mba tsy hilazana fa matahotra hanao ny asany dia ny miaro ny vahoaka sy ny fananany. Nivalona, tsara pirina any anaty vatasarihana ny fehin-kevitra nivoaka nandritra “assises militaires» teny amin’ny Centre de Conférences International Ivato ny 27 sy 28 mey 2009, mandrara ny tsy tokony hitsabahan’ny miaramila amin’ny raharaha politika. Ny fihetsika nataon’ireto komandy miaramila tao amin’ny Toby Ratsimandrava omaly iny koa dia sady fihantsiana ny iraisam-pirenena no mampibaribary indray fa nisy fanonganam-panjakana teto ary tao an-damosin’i Andry Rajoelina ireo. Koa asa na mbola hahavaha izao krizy izao ny resaka diplaomasia.
Mazava rahateo ny fanapahan-kevitry ny Parlemanta Eoropeanina mikasika an’i Madagasikara farany teo. Ny fantatra aloha hatreto dia tsy miray hevitra amin’iny fanambarana omaly iny ny eo anivon’ny foloalindahy. Misy manamboninahitra, manamboninahira lefitra ary vatamiaramila maromaro tezitra nanoloana iny fanambarana politika ranoiray nataon’ireo komandy miaramila iny, satria dia sady hiteraka savorovoro eo anivon’ny foloalindahy, no vao mainka hampitombo ny fahantran’ny vahoaka satria tsy hahazoana fankatoavana iraisam-pirenena. Mametra-panontaniana ireto manamboninahitra, lefitra ary vatamiaramila ireto hoe mba aiza ireo zokibe jeneraly no minia tsy mahita sy tsy andrenesam-peo manoloana ny zava-misy ?
Foloalindahy Miala any indray ny fikomiana ?
Asa na fifandrifian-javatra fa nifanojo indrindra tamin’ny fivoriana tsy ara-potoan’ny SADC tany Sandton Afrika Atsimo mba handinihana ny famahana ny krizy eto Madagasikara sy atsy Zimbabwe dia niparitaka teto an-drenivohitra indray ny resaka fanonganam-panjakana sy fanafihana toby miaramila.
Nandeha ny feo fa misy vondrona manamboninahitra mikotrika zavatra hafahafa ka mety ho tanjona amin’izany ny fanafihana toby miaramila eto Antananarivo sy ny fakana fitondrana mihitsy. Raha io resaka mandeha io ihany dia toa hoe leon’ny sangodim-panina ataon’ny mpanao politika tsy mety mahavaha ny krizy ireto vondrona miaramila ireto ka haka ny fitondrana. Raha izany rehetra izany no dinihana dia ny fametrahana ny fitondrana miaramila izany no tena tanjon’ity hetsika ity. Tsy vao izao moa no nahenoana ny feo sy vaovao tahaka izany fa efa hatramin’ny 2006, ary niaraha-nahita ireo trangana fikomiana niseho teny Ivato, nitohy ny 2009 teny amin’ny RAS Ampahibe, ny BANI Ivato ary ny FIGN Fort Duchesne.
Ankoatra izay dia misy ihany koa ireo manamboninahitra tsy hita popoka na nisy namono, na maty tampoka, na namono tena, saingy toa nangina avokoa ireny raharaha rehetra ireny noho ny antony tsy fantatra. Any anaty toby miaramila any koa dia mbola maro ny hasosorana sy tsy fifankahazoana ka mety manome vahana ny fifandrafiana izany. Tsy takona afenina ihany koa, ary araka ny nambarana manamboninahitra am-perinasa iray dia misy ny mpanao politika mifandray sy mivory matetika miaraka amin’ny miaramila sy ny zandary, ary na dia tsy miteny ihany koa aza izy ireo dia mbola misy ireo ao anatin’ny foloalindahy no tsy mankasitraka izao fitondran’i Andry Rajoelina izao ary manantena fa hiverina eto ny Amiraly Ratsiraka sy Atoa Ravalomanana, izay samy mbola manana ny olony any anatin’ny foloalindahy Malagasy any. Raha fehezina, maro ny zavatra mbola mila fandaminana eo anivon’ny foloalindahy satria mbola mahazo vahana ao ny ady mangatsika sy ny fifampiandaniana ary ny fahasosorana izay amety hitarika zavatra hafa.
FAT Manangana ady amin’ny SADC
Mbola niompana betsaka tamin’ilay fanapahan-kevitry ny SADC tany Sandton farany teo ny kabary tetsy amin’ny kianjan’i Magro Behoririka omaly.
Afaka ny ahiahy ary resahina eran’izao tontolo izao fa hiverina an-taniny ihany koa ny filoha roalahy, hoy ny Depiote Rodin. Ireo filoha ireo, indrindra i Marc Ravalomanana, no nanome asa ny vahoakany ary nampahiratra ny fireneny, hoy izy. Manakorontana ny sain’ny hafa anefa izany ka dia miteniteny foana izy ireo. Marina fa ny fifidianana no hamaranana ny krizy ary eo no ahitana ny mamim-bahoaka fa tsy ianareo irery kosa no hikarakara izany azafady. Mbola nampieritreritra ny mpomba ny fitondrana FAT izy tamin’ny filazana fa : tsy io ve ilay SADC naindraindra ? Izao toa miova fiteny ? Fa inona tokoa no atahoranareo an-dRavalomanana ? Ilay izy nahasahy nibebaka tamin’ny vahoaka ?
Tsy nisy izany tokoa eran-tany â ! Mazava ny resaka ankehitriny fa tsy azo ihodivirana ny fiverenan’ny filoha roalahy, hoy Ralaiseheno Guy Maxime nanohy izany, ka dia fantatra fa mikononkonona etsy sy eroa ny FAT fa tsy manaiky ny tapaky ny SADC. Hiampanga azy mantsy ny fodian’ireo Filoha roalahy ireo, indrindra fa ny an-dRavalomanana Marc, hoy i Sylvain, satria ny fiverenan’ny Filoha Ravalomanana sy Ratsiraka ary fivoahan’ny gadra politika no midika fankatoavana iraisam-pirenena. Vavolombelon’ny fampijoroana ny fahamarinana sy ny fiverenan’ny Filoha Ravalomanana no nijorona ka nody ventiny ny rano nantsakaina, hoy i Tsianihy. Miomàna hatrany amin’ny fahatongavany. Tamin’ny 1971 no nisy vehivavy voalohany mpitolona maty tany am-ponja. Ity tetezamita ity no fahefana nampigadra olona be indrindra nefa ny fampidirana vehivavy am-ponja dia fady.